အညာမြေ: Firefox နဲ့ Ip change တာလေး
တမာမြေ ၇နံသင်း အညာ၇ွှာ ၇ှူခင်း၇ယ်နဲ. .......
MR new & LInks
Firefox နဲ့ Ip change တာလေး
အ၇င်ဆုံး FoxyProxy Standard 3.4 ကို ဒီကနေ> သွားပီးတော.Add to firefox ကို နိုပ်လိုက်ပါ. .. install လုပ်မလားမေးပါလိမ့်မယ် ဒါဆို Install လုပ်လိုက်ပါ
Firefox ကို Restart တောင်းပါလိမ့်မယ်။ Restart ပြန်တက်လာရင် Firefox အောက်ဆုံးထောင့်လေးနားမှာ အောက်ကပုံလေးလိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Proxy သို့မဟုတ် IP ကိုယူလာပြီး ကျွန်တော်တို့ Foxyproxy ပုံလေးကို နိုပ်လိုက်ပါ. ဒီကနေမှ Add New Proxy ကိုရွေးပါ. ..
အပေါ်မှာ ယူလာခဲ့တဲ့ IP ကို Host or IP Address ဆိုတဲ့နေရာကွက်လေးမှာထည့်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ့ . နောက်က Port ကတော့ ဘာမှ မထည့်ပဲ့ Tab ကို နိုပ်လိုက်ရင် အလိုအလျှောက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ .
Firefox ကနေ ထည့်ထားတဲ့ Proxy ကျော်တော့မယ်ဆိုရင် ကျော်လို့ ရပါပြီ ။ အဲ့တော့ Firefox အောက်ထောင်က foxy ပုံလေးကို ညာကလစ်နိုပ်ပြီး Use Proxy …................(....= IP) for all URL ကို ရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ ဒါဆို ကြည့်ချင်တဲ့ဆိုဒ်ကိုကြည့်လို့ရပါပြီ
Posted by anythar at 07:05
anythar 15 January 2012 at 07:57
<--နားပူ၇င်တော.....r .click နိပ် .play _/ အမှန်ချစ်လေးဖြုတ်ပေးပါ
၀တ္ထု တို (4)
eng movie (16)
korea 근로자 (4)
phone game (18)
်free lover (5)
Popular one week
အချစ်၏တည်နေရာ လွမ်းသမျှ..............မပျော် တမ်းတ,.............. မျှော်....ငေး ဖော်မဲ့ ,.......... ဝေးကွာ သောက,.......ရွာ ။ ''...
. Korean-Myanmar Dictionary System Requirement Windows7Alpha Zawgyi Unicode Finder Korean-Myanmar Dictionary .rar (498 KB) Downloa...
Aslphalt6ကားဂိမ်း
ကားဂိမ်းဆော.ချင်တယ်ပြောလို.ပါ.Android phone အတွက်ပါ Requirement များတယ် Available for: HTC ADR6350 (Incredible 2, Vivo) HTC Desire HD...
Android phone And Myanmar font
Samsung galaxy ဖုန်းတွေမှာတော. root လုပ်စ၇ာမလိုပဲ မြန်မာလို အဆင်ပြေစွာေ၇းနှိုင်ဖတ်နှိုင်ပါတယ်.. အင်တာနက်သုံး၇တယ်ဆို၇င်တော. ဒီလင်.နှစ်ခ...
App Screenshots . planet, myanmar, dictionary, english to myanmar, offline download>>>>> market link
Shweyoe Dictionary Version 3.0
ရွှေရိုး အဘိဓာန် Version3ဖြစ်ပါတယ်..။ Version3မှာတော့ ဘာသာစကားငါးမျိုးမှ မြန်မာဘာသာကို အပြန်အလှန် ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ်..။ ထည့်သွင်း...
Bo Aung Din - Full Movie
ဗိုလ်အောင်ဒင် (ခင်မောင်ရင်၊ မေမေ၀င်း။) ဗိုလ်အောင်ဒင် ဇာတ်ကားအမည် ဖြစ်လာရပုံမှာ စာရေးဆရာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေး ဆရာ ရွှေဒုံးဘီအောင်သည် သူ၏ပွဲဦးထွ...
သီချင်း၇ှာ၇န် Music>>FLASHSONGS စုစည်းမူသို.
SnowQueen လက်ခံပေးပါ(၂) HERO ( မေ ) မမြင်ကွယ်ရာ ဟိုအရင်လို ငါ့ကိုပြောပါ မျှော်လင့်ချက်မဲ့(မျိုးကြီး) ယုံကြည်ပေးပါ BellyDancer ယုံကြည်ပေးပါ(Remix) အဖြူရောင်လေးပါကွယ် ရင်ထည်းခိုနားလှည့်ပေါ့ကွယ် မုန်းခိုင်းတိုင်းမမုန်းနိုင်ဘူး ပေါက်တဲ့အိုး တိတ်တခိုးအချစ် စံပါယ် တခုလောက်ဖြေပေးပါ ယုံကြည်ခြင်း၂ မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် ကမ္ဘာပျက်နေ့ နင့်ကိုငါအချစ်ဆုံး ကင်ဆာ အချစ်နဲပိုက်ဆံ နင်တစ်ယောက်တည်း သံစဉ်နဲ့ချော့သိပ်ခွင့် (မမ) ချစ်တယ်မရေ အချစ်မှတပါးအခြားမရှိပြီ တနေ့တော့ချစ်လာလိမ့်မည် အမေ့ မင်းအကြောင်းအိမ်မက် တန်ဆောင်တိုင်သီချင်း အလွမ်းနဲ့ရူးပြီ နှမြောတယ် သူလေး ကောင်းကင်ကအချစ်ငှက် ဆာဒါငဲယိုး ခိုနားရာ အိမ်မက်ကမ္ဘာ အလွမ်းဝင်္ကဘာ ပထမအနမ်းသီချင်း စကားလုံးတွေမလိုဘုး (နိဒါန်း) လေလွှင့်သူ အာဇာနည် ငါဆက်ချစ်မယ့်သူ ရုပ်သေးရုပ် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ ဒီတစ်ခါမခွဲတော့ဘူး ချမ်းချမ်း(ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း) မျိုးကြီး(နူးညံ့စွာပြောင်းလဲခြင်း) လက်ခံပေးပါ(၂)မျိုးကြီး မျိုးကြီး=အတိတ်ရဲ့နွေ Baby စပါယ် အမြဲတန်းယုံကြည်တယ် သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ် မိန်းကလေးပါ ဒီဇင်ဘာည၂ ပြည့်စုံလွန်း အသိအမှတ်ပြုပါ ကြယ်ကြွေကောင်းကင် Congratulation ညီမလေး မကြင်နာလေသူသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသဲကွဲသောနေ့ ပထမအနမ်း ချစ်သူသိပါစေ နင်မသွားခင် နှမြောတယ် မျှော်လင့်မိတဲ့ငါ့နတ်သမီး လမ်းခွဲ နောက်ဆုံးပေါ့ Baby-(Mc Wai Lin) ရင်ထဲကလာတဲ့သီချင်း ကော်ရုပ်လေး လွမ်းဆွတ်ခွင့် ချစ်သူ-ရိန်မိုး ငါ့ရဲ့လမင်း(လေးဖြူ) ရင်ခုန်စရာရှုခင်း(မျိုးကြီး) ကိုယ့်ရဲ့ကွက်လပ် ဆု....ထံသို့ ခလေးလေး မ-အတွက်သီချင်း ယုံမှာလား ရောခ့်သီချင်းတစ်ပုဒ်(မျိုးကြီး) မိုးသည်းချိန်မှာ Venus လမ်းဆုံး ပြန်လာပါ အလည်လွန်နှလုံးသား ဒို့ဝေးရာ ကျေးလက်တောတန်း အင်တာနက်ချစ်သူ ပြန်လာမဲ့အချိန် ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် SaveTheAged ဆာဒါငဲယိုး၂ ပျော်တော်ဆက် ကောင်မလေး မင်းအချစ်ကြောင့် မလွမ်းဘဲမနေနိုင် မလှည့်စားနဲ့ အလွမ်းနေ့ရက်ရှည်များ ဒီအတိုင်းလေးဘဲချစ်နေမယ် အတောင်ပံပါရင်မင်းဆီကို TakeMeToYourHeart ထားအတွက် ကင်တင်းထဲကကွင်းလက်ချာ(အရိုး) ILoveYou ရာစုသစ်အလွမ်းသမား Rain Story (ပြည့်စုံ) မင်းနဲ့မှချစ်တတ်ပြီ အချစ်ဒါဏ်ရာ လွမ်းတယ်(မ)ရယ် မင်းနားလည်မှာ ချစ်သူရဲ့ပုံပြင်(အနွန်) (မ)အတွက်သီချင်း ကျောင်းပိတ်ရက်လေး ကျေးဇူးပဲမနက်ဖြန် ကောင်မလေး onelesslonelygirl ငါ့နေရာ "မ" အတွက်သီချင်း ကဗျာမမှီတဲ့အချစ်
မ-sample တိတ်တခိုးအချစ်-ရိန်မိုး မ-ပူစူး မင်းကိုသတိရရင် တွဲဖက်အပြုံး-ရိန်မိုး အရမ်းပဲချစ်နေပြီ-ရိန်မိုး လေပြေ ဆု အမေတခုသားတခု အရမ်းပဲချစ် ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့သူ ရိုမီယို ဂျူးလီးယက် တောဂေါ်လီ သူလေး ရင်ခုန်ဘက်သို့တမ်းခြင်း ကြွေပါစေ လမ်းမခွဲကြေး မင်းနဲ့ငါနဲ့ မေမေ မင်းအတွက်ပါ သနပ်ခါးချစ်သူ အနီးဆုံးလူ ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါအမေ သင်္ကြန်မိုး အပြစ်မမြင်ပါဘူး ကမ္ဘာအပြင်ဘက် နှလုံးသားရှိတဲ့အရပ် မျောလွှင့်နေတဲ့တိမ် အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုး ငါချစ်တာမင်းပဲ နေညိုရင် ပူစီ ချစ်သူကို ချမ်းမြေ့ပါစေ စိတ်ကူးယဉ်အနမ်းများ နွေဦးကဗျာ မိုးသိပါစေ ဘ၀ချင်းခြားလည်းချစ် ပုဂံဘုရားဖူး မမကြောင့် ညစဉ်ညတိုင်း အလွမ်းမိုး မြူမှောင်ဝေကင်း နှစ်ပါတ်လည် ကောင်မလေး နောက်ဆုံးရင်ခွင် မလွမ်းပဲမနေနိုင်ဘူး လုံးဝမမေ့သေးဘူး အိမ်-ဓီရာမိုရ် လမ်းဆုံ ကိုကိုက အာဇာနည်(၄)ပုဒ်နဲ့address-card တမိုးအောက် ယုံပါရင်သို့ ဒီတညတော့ ဟင့်အင်းအမေကဆူလိမ့်မယ် တခါထဲချစ်ချင်လို့ပါ ထူးဆန်းလွန်းတဲ့အချစ် ပြော ကြွေသူနှစ် ကောက်သူတစ်
မင်းအကြောင်းအိမ်မက် မိန်းမယူရင်စဉ်းစားကျ ချစ်သူရင်ခွင် ၀တ်မှုံ သီချင်းတပုဒ်မင်းဆိုလိုက် We are the world သူ့ကိုကျနော်ချစ်သည် မင်းမုန်းမှာစိုးတယ် မင်းလေးကိုသိပ်ချစ်လို့ မင်းသိလာမယ် ယုံကြည်ပေးပါ မျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန် ကလေး လေး ချစ်ရက်နဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ဆန္ဒတစုံ အလွမ်း ဖူးစာရှင် သဲသဲလှုပ် ဝေခွဲမရပါလား လိုက်ဖက်တဲ့ဘ၀ ငါ့ရင်ခွင်ကို အဆင်ပြေပါစေ Gtalk သူ ၀န်ခံလိုက်ပါ ရီးစားစာ တခါထဲချစ်ချင်လို့ပါ (၂) မိုး တိုးတိုးလေး ကြည်နူးခွင့် မုန်းမေ့ဖို့မလွယ် မလွယ်ပါကွယ် ကျောင်းသီချင်း ကြိုနေစေချင်တယ် ချစ်ကံဆိုး အပြုံးလေး နတ်သမီး လမင်းသို့ သီချင်းမဲ့ဂီတာ အမောပြေ ဆုတောင်းမယ် ဆုတောင်းမယ်(၂) ဟိုအရင်လို မိုးသည်းထဲမှာ အမေ နင်ပြန်လာခဲ့ ပေးဆပ်ခွင့် အချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူ ချစ်တယ်ဟုတ် ဖန်သားနန်းတော် ဒို့လည်းလိုက်မယ် မြတ်နိုးသူအတွက် ပုံရိပ်လေး ပြန်တော့ကွယ် အချစ်ကိုသိချိန် မင်းတယောက်သာ မမချစ်လို့မဖြစ် အမြတ်နိုးဆုံး ချစ်ခွင့်ရခြင်ပြီ ခွဲခွာရက်သူ ဘာကြောင့်လဲ အတ္တ စာမျက်နာ ၁၅ မျက်နာများတဲ့မောင် ဒီလမ်းမကြီးရဲ့ ဘေး အင်းယားသို့ နှစ်ပတ်လည်(၂) မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် ပြန်လာပါကွယ် သူသိပါကွယ် All out of love စလုံးကချစ်သူ ပတ်သက်ခွင့်ပြုပါ တကယ့်ပုံပြင် ကောင်မလေး တယောက်သောသူအတွက် မင်း မရေရာဘူး မအေးကိုချစ်လို့ ဆက်ချစ်ခွင့်ပေးပါ ညှို့နှိင်လွန်းတဲ့သူ ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်လွှတ်တယ် ကြိုပြီးတောင်းပန်တယ် ရဲလေး သီချင်း ရီးစားထားတဲ့အရွယ် အချစ် = အချစ် သီးသန့်ဖြစ်တည်မူ ကိုကို့စိတ်ကူး မမက တကယ်ဆိုအချစ်ဘဲလိုတယ် ကြယ်ကြွေကောင်းကင် အချစ်များသူ့ဆီမှာ ပြန်တွေးကြည့် ယုံကြည်တော့အချစ် ကောင်ကလေးကကောင်မလေးကို နေရာ တယောက်သော သူ အဆုံးမဲ့ အလွမ်းပြေအနမ်း အလွမ်းဆုလဒ် ဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ် မင်းသိလာမယ်2ပြန်မဆုံဖြစ်ကျရင် နောက်ဆုံး အမှန်သိခွင့် (ဒိုးလုံး) ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှ တခါခါ စိတ်လျှော့လိုက် ရိုးရှင်းသောဘ၀ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မူ ဓမ္မဒါန လမ်းကြုံရင်ပြောပေးကြပါ StayWithMe ချစ်ခဲ့တာလားရူးခဲ့တာလား BadGirl သန်ခေါင်ယံည နုတ်ဆက်စာ အလွမ်းပြေအနမ်း ၂ ပြန်မဆုံဖြစ်ကျရင်၂ အချစ် နှောင့်ယှက်သူ ပြန်မရဘူး ငါ့ရင်ခွင်ကို ၂ မေ့တော့မေ့သေးဘူး မြတ်ဆုမွန် မကြာခင်မှာကြင်နာမယ် နေချင်တယ်မင်းအနား ဝေးလို့နေမလားမေ့လို့နေမလား ရွှေတိဂုံ(၂) သံယောဇဉ် သံစဉ်တွေနဲ့ချော့သိပ်မယ် ကောင်မလေး နောက်ဆုံးအချစ် မချစ်နဲ့တော့ မျှော်လင့်ခြင်းကွင်းပြင် MyHeartWillGoOn လွမ်းရဲမှ ၀ိရောဓိ အလွမ်းဝင်္ကပါ မင်းတယောက်သာ BeWithYou ကိုယ်မညာချင်တော့ဘူး ဆွေးမြေ့အသဲ သံယောဇဉ် ချစ်သူထားခဲ့တော့ ချစ်ဦးမေ အချိန်တိုင်းပဲ နားလည်ပါ ကြယ် လွန်ပါစေအလွမ်းညတွေ လူလည်အာရှသား ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ကြေကွဲရလိမ့်မယ် စိတ်ကူးလွင်ပြင် KissMe မ..ကို မီးအိမ်ရှင် အလွမ်းပြေအနမ်း လွမ်းနေပြီ လွမ်းနေပါတယ် အလွမ်းနိဂုံး မင်းချစ်မှချစ်ပါ့မလား အပြုံးလေး စိုးရိမ်ရတာပေါ့ မျှော်လင့်ခြင်းအဆုံး အပြစ်တခုဖန်ဆင်း ဘ၀ရဲ့လမ်းများ ခွဲခွါခြင်းနေ့ရက်များ ငါတော့မှားပြီ ကိစ္စမရှိဘူး မင်းနဲ့မဆုံသ၍ တို့နှစ်ယောက် ပျော်ပါစေ ဖက်ထားမယ် မ-မရှိတဲ့နေ့ရက်များ တွဲလက်များ ဒီကောင်မလေးအတွက် ရှင်သန်ခြင်းပြဇတ် ရွှေရောင်အရှုံး (အိမ်) နင်သိရဲ့လား နေညိုရင်၂ ငါ့ရဲ့အနား ခိုင်မြဲသောအချစ် ငါ့ရဲ့လမင်း ချစ်လို့ရရန် အလွမ်းပြေအနမ်း၂ မင်းလိုက်ရဲပါစေ သူငယ်ချင်းချစ်သူ အင်းယားလမ်းကပန်းဆိုင် သတိရရ-မရရ အဖြည့်ခံချစ်သူ တိတ်တခိုး နင်မလိုချင်လဲ လမ်းပျောက်ချိန် အလွမ်းကဗျာ အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ မညာပါနဲ့ ချစ်သူလေး ညလေပြေ အိနြေ္ဒရှင်မလေး မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် လေပြေ၂ တဖက်သတ်အလွမ်း ဝေးပြီးတဲ့နောက် မနဲ့မောင် ချစ်တယ် ပြုံးလိုက်ပါ နှလုံးသားချင်းထိတွေ့ခဲ့တယ် ဖူးစာရှင် ဗုဒ္ဓမေတ္တာပန်း အိမ်မက်ရဲ့သမီးပျို မင်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ အလွမ်းသင့်ပန်းချီ ပျော်သလိုနေလိုက်တော့ စိတ်ကူးလွင်ပြင် အလွမ်းနိဂုံး မျှော်လင့်ခြင်းအဆုံး ဘ၀ရဲ့လမ်းများ နင်သိရဲ့လား အလွမ်းပြေအနမ်း၃ လရောင်ဆမ်းသောလမ်း တစ်ဖက်သက်အလွမ်း ဝေးပြီးတဲ့နောက် တစ်နေ့တော့ လမင်းသစ်ပင် ချစ်သူ နားနားဘေးမှာ ပျံသန်းသွားတော့ ဟုတ်လို့လား Never Be Replaced ချစ်မိနေပြီ နိုးတစ်ဝက်အချစ် အချစ်အတွက်ကိုယ်စား ငါ့ရဲ့အနား ၂ ဝေးသွားတဲ့အခါ မီးအိမ်ရှင် ငါ့နေရာ Anywhere for you Justin Bieber(Baby) သီရိသူ ဒီဇင်ဘာည ဒီဇင်ဘာည၂ ငါမှားလားမင်းမှန်လား ဆေးကျောင်းသား တကယ်ဆိုရင် အမေ စွန့်လွှတ်ခက်သူ နင်စေရင် အနှိုင်းမဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက အနိုင်မယူသူရဲ့အရှုံး ခိုးချစ်ရသူ နှလုံးသားအစီရင်ခံစာ ညီမလေးအတွက် မိုး(မျိုးကြီး) မိုး၂(မျိုးကြီး) ( 8.4 ) ချစ်တယ်ဟုတ် ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်း ဖက်ထားမယ် LetMeKissU ချယ်ရီသက်သေ ဖိတ်စာ နွေအလွမ်း ယူလိုက် အဖေ့မေတ္တာ လက်ခံပေးပါ(မျိုးကြီး) HaHaLaGyiAh မမ အပျိုကြီး height=200>
သီချင်း၇ပ်၇န် right-click >>Rewine သိမ်းထားမယ်ဆို သီးချင်းပေါ် right click save link as
ငါးထောင်ကျပ်တန် SIM CARD ကို ရောင်းချမည့် အစီအစဉ်...
ကျပ် ၅ထောင်တန် ဖုန်းဆင်းကဒ်ရောင်းချနိုင်ရေး
window764 bit စာလုံးဆင်.အခတ်ခဲ
The Regiment Portable Game
Empire Defense II ANDROID GAME
Android apps to Windows 8
2012 ထဲမှာကြည်.၇မဲ. ၇ှပ်၇ှင်တွေ..... COMING SOON ...
hill have eyes 2
Mr. Bean 's Holiday
Android မှာ မြန်မာဖောင့်မသွင်းပဲ၊ မြန်မာဆိုဒ်တွေ ဖ...
pes 2012 pc game version 2.6
Think Free Office For Android
ENGLISH>><< MYANMAR Dictonary
File တစ်ခုဖွင်.လိုက်တိုင်းထက်ထက် ပီးပွင်.နေခဲ.၇င်
how to makeabootable ISO OR window ခွေကို co...
Air Conflicts: Secret Wars pc game
2012 HAPPY NEW YEAR SEOUL
2012 Movie If the Earth had ever had rotation prob...
G.talk မခွဲနှိုင်သူများနဲ.messenger ၀င်မ၇တဲ.အခါ
တိုင်းရေးပြည်ရေး (မင်းဒင် ရေးသည်)
ဆိုရေးရှိပြီ ဟု ထင်မြင်သည်။ (မင်းဒင်ရေးသည်။) ဆိုရေးရှိပြီဟု ထင်မြင်သည်။ ...
For Android Game Lover Play Store Link> >>>>>>> > App Screenshots . Updated: March 7, 2013 Curren...
window 7, 8, xp, vista 32 and 64 bit start menu bar
၀င်းဒိုး 8 ၀ယ်ပီး start menu မပါ၇င်သုံး၇တာအားမ၇ဘူးဆိုတဲ.သူငယ်ချင်းများအ တွက် ဒေါင်းပီး၇င်run ပေးလိုက်ပါ.တခြားသုံး၇တဲ. function တွေ လဲအမ...
For Cs5User Gide pdf mr.
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးထားတဲ. .cs5 သုံးနည်းစာအုပ်ပါ >>>media>>. DOWNLOAD
Android Game Full Version Gpk(without SD Data) installလုပ်နည်:
ကျနော်Android OS Deviceတွေမှာ gameဖိုင်တွေကို Data မလိုတဲ.Full Version gpk ဖိုင်တွေ installလုပ်နည်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ...
Android V4.2.2 အဆင့်တွေမှာ USB Debugging
ဆုန်းသင်းပါ သီချင်းထဲကလိုပဲ မင်.ဘယ်မှာလဲ....လေး usb က တိုင်ပွတ်နေတာ ၇ှာမတွေ.လို. Android V4.2.x အဆင့်တွေမှာ USB ကြိုးချိတ်ရန် Setting...
737 နဲ. ကျွန်တော်
737 နဲ. ကျွန်တော် .. ဘူဖြောင်းဆို တာကတော.မြန်မာအလုပ်သမားများသူငယ်ချင်းတွေ.ဆုံတဲ.မြို. မြန်မာ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်၇ှိ၇ာမြို.လ...
MYANMAR UNIOCDE FONT 4
သင့်အနေနဲ့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်ပဲ ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး ၊ အဲဒိအတွက်လည်း ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်းပဲ ရိုက်လို့ရအောင် စီမံပေးထားကြပါတ...
ဒီ software လေးကို run ပြီး အဲဒီ software ထဲမှဘဲ - Computer တွေဖန်တီးမယ် - Router တွေဖန်တီးမယ် - Cable တွေ ချိတ်မယ် - IP တွေပေးမယ် - S...